ONLF oo Guul Wayn oo Dhinaca Siyaasada ah Gaadhay Labadii Sano ee u Dambaysay – Rasaasa News
Jijiga, Feb 28, 2021 – Jabhada wadaniga xoraynta Ogadeniya ee u dagaalanta xoraynta dhulka Somaalida Ogadeniya labadii sano ee ugu dambeyay waxay ku talaabsatay guulo la xidhiidha dhinaca siyaasada iyo bulshada.
Jabhada Wadaniga xoraynta Ogadenia waxay heshiis nabadeed la gashay xukuumada Abiy Ahmed, halkaas oo qalinka lagu duugay Caasmara heshiis taariikhi ah 2018 kaas oo soo afjaray dagaal socday afar iyo labaatn sano oo xidhiidh ah. Inkasta oo xukuumada Abiy Ahmed ayna wali fulinin qodobadii heshiiska ku jiray, lagana yaabo in dhamaystirka qodobada heshiiska uu muhiim u yihiin xukuumada iyo Onlf.
Muddadaa labada sano ah Jabhada Onlf, waxay si wanaagsan ula falgashay dadwaynaha Soomaalida Ogadeeniya iyada oo ay masuuliyiinta Onlf booqashooyin joogto ah ku tageen dhamaan gobolada, dagmooyinka iyo tuulooyinka. Onlf waxay fursad qiimo leh siisay shacabka Soomaaliyeed si ay u fahmaan hadafka guud ee halganka gobonimo doonka kaas oo ay aad u soo dhaweeyeen dadwaynuhu. onlf waxay muujisay dulqaad siyaasadeed oo soo jiitay siyaasadaha nabada ku dhisan ee caalamka, waxaana dhexmaray isfaham.
xukuumadaha Itoobiya waxaa caado u ah qaybinta beelaha Soomaalida ee ay maamusho taas oo Itoobiya fursad u siinaysa in sida ay doonto ka yeesho dadka Soomaalida. Siyaasada ku dhisan qaybi oo xukun waxay Itoobiya u adeegsataa madaxada ismaamulka gobolka Soomaalida taas oo u egg maanta in ay dhamaatay dadka Soomaaliduna garab taagan yihiin Jabhada Onlf.
Dadwaynaha gobolka Soomaalidu waxay si wadajira taageero buuxda ugu hayaan jabhada wadaniga xoraynta Ogadeeniya oo u taagan sidii ay u soo dhicin lahayd xuquuqda Soomaalida, si ay ddku u helaan cadaalad u horseeda barwaaqo iyo horumar ay kaga baxaan dhibaatooyinka dib u dhaca.
Cabudhis kasta oo dadwaynaha Soomaalida Ogadeniya ismaamulka gobolku saaro marna kama tirtiri karo shacabku kalsoonida ay u hayaan Onlf.